လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: August 2012
Friday, August 31, 2012 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
မြင်းခွါရွက် အမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ မြင်းခွါရွက် ရိုးရိုး၊ အညာမြင်းခွါ၊ ကာလားမြင်းခွါ၊ ဆေးမြင်းခွါ ဟူ၍ မြင်းခွါရွက်မှာ တကယ့်မြင်းခွါ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တူပါသည်။
ရိုးရိုးမြင်ါးခွါကတော့ ဆို့စရာဆို၍၄င်း၊ ယင်းရံ၊ ဟင်းခါးဟူ၍၄င်း၊ မြန်မာများ အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။ သုပ်စား ပြုတ်စား အရည်သောက် အစိမ်းတို့စားကြ၏။ အရသာ ခပ်ခါးခါး ခပ်ရှရှ ချို၊ အေး၊ နှုတ်မြိန်၊ အစာကြေစေ၊ ဝမ်းဗိုက်ကိုခြောက်၊ အိပ်ပျော်စားဝင် ဓာတ်လေးပါးမှန်၊ အသိဉာဏ်တိုးပွား၊ ဆီးရွှက်၊ အပူငြိမ်း၊ အအေးကိုပြယ်၊ ရေငတ်ပျောက်၊ သလိပ်ပယ်၊ အသက်ကိုရှည်စေ ဟူ၍ မြန်မာ့ဆေးကျမ်း၊ အိန္ဒိယဆေးကျမ်းများက ဆို၏။ မြင်းခွါသည် အေးမြသောမြေမှာ ပေါက်သောမျိုးဖြစ်၏။ အယဉ်နှင့် အရိုင်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အယဉ်မှာ အမွေးမရှိ၊ အရိုင်းမှာ အမွေးပါ၏။ အရိုင်းမှာ အညာဒေသ တောထဲ မှာ ပေါက်၏။ အယဉ်က ယခု စားစရာဖြစ်နေ၏။ အကျိုးက ဆီးများ၊ လေသက်၊ ဝမ်းမှန်စေ၏။
Wednesday, August 29, 2012 ထွေရာလေးပါး
ရောင်စုံ သကြား၊ သကြားလုံး တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပ...
လယ်သမားကြီးရဲ့ ခေတ်ပေါ် Pickup ကား....
လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စက်ဘီးထားရန်နေရာ အဆန်းလေးများ......
ခြေနင်း(Pedal)တွေကို နင်းပြီး အသုံးပြုရတဲ့ စက်များ...
iPad ချစ်သူများအတွက် Docks and Stands များ....
No Pain No Gain...? Or What....?
ကွန်ပြူတာ Software/Hardware နဲ့ IT ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လ...
This is How Brother Of Barack Obama Lives...
First Consequences of Nuclear Catastrophe in Fukus...
"မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်" လို့ အိုလံပစ်မှာ ရေ...
ညီအမ ၄ ဖော်ရဲ့ ဖန်တီးမှု....
ဂေါက်သီးလည်းရိုက် မိချောင်းလည်း သတိထား...
ဗြိတိန်ပန်းချီဆရာ Nicholas James Gentry ရဲ့ Floppy...
ယူကရိန်းပါလီမန်က နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဒီလိုဖြေရှင်းတ...